Njalo umama wazibuza: "eneminyaka emingaki anganika uju ingane?" Ukuze uqale, ake sibone: kuba izingane ukuba impilo noma ukulimala? Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe siqale sithole ukuthi kukhona i-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile e ingane kulo mkhiqizo. Uma uncelisa ke lizame ukudla uju oluncane, esisodwa noma ezimbili amathisipuni kwanele. Ngemva kwalokho, ahlole ngokucophelela umntwana izinsuku ezimbili ukuze ubone ukuthi ukuqubuka yavela. Uma kungenjalo, ungazama amnike kancane. Khona-ke, inani kungenziwa kancane kancane ukuba isipuni. Ukunika uswidi nsuku zonke, futhi mayelana 2 katsatfu ngeliviki. Uma zavele le ukuqubuka umntwana, ukuhlola kumele kumiswe - ngeke ibonisa yokungezwani komzimba. Kulokhu, akukho nokuncane ukungabaza.
Uma ingane yakho aqine ikhuthazelele lonke uvivinyo, kodwa namanje iqiniso ukuthi, ngasiphi yobudala anganika uju ingane njalo, ukuphendula. Mina nazo esifana ne omunye umkhiqizo ukuthi ufaka e nokuyenga. Kunomkhawulo enanini eliphezulu: ungayeki amathisipuni engaphezu kwemibili ngosuku.
Ngifuna ukuziqhakambisa khona neqiniso lokuthi akuyona yonke uju ngokulinganayo ewusizo. Ochwepheshe bathi ukusabela iguliswa iwumkhiqizo engaphelele. Ngakho, ngaphambi kokuba lona umntwana yakho, qiniseka ukuthi uju muhle. Indlela ukukwenza? Thola beekeeper ngokwethembeka. Desirably, izincomo bangani. Uma kungenjalo, khona-ke ukuthenga esitolo, ucele izitifiketi, wazi ukuthi uju kumele kucaciswe, ilebula kumele lokuqoqa futhi ukupakisha usuku, kulotshiwe ukuthi kungokwemvelo futhi iqukethe akukho izithasiselo.
Ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo omuhle, emuva umbuzo ukuthi mdala anganika uju ingane. Omunye kufanele uqale nsuku zonke Ukudla izinyosi nge cishe unyaka, kodwa uma ekwindla yemvula iqala lapho yakho izinyanga umntwana eziyisishiyagalombili ke iya kuyo. Ngaso sonke isikhathi kufanele nesisindo iyasiza futhi umonakalo. Uma ingane akanayo komzimba ke ematfuba lapho ivela khona enqubeni wokwamukela sincane kakhulu. Ngakho-ke, unothile ngamavithamini kanye izakhi trace umkhiqizo evikela uhlelo umntanakho sokuzivikela kubaluleke kakhulu ekudleni yakhe, uyokwelula zinkulu umonakalo kungabangela komzimba. Uju kufanele inikwe izinsana for nokuvimbela imikhuhlane, ngoba, phakathi kwezinye izinto, has okusezingeni eliphezulu izakhiwo elwa namagciwane.
Phatha kakhulu ngempumelelo kusiza izingane ukuzumeka, uma ixubene ubisi olufudumele. Lokhu isiphuzo opholile izingane. Uju kungaba ngempela ngempumelelo esikhundleni ushukela nokusanhlamvu.
Njengomthetho, njalo lomdabu luhlukanisa yena nalokho yobudala ngomntanakhe uju. Nokho, khumbula umthetho owodwa: ungafaki ke ngamanzi abilayo, kungenjalo zonke izakhiwo zayo eziwusizo bayobhujiswa. Beka uju in a ukudla ngokushesha ngaphambi yokudla, lapho itiye, ubisi, noma iphalishi - efudumele.
Ebusika, lapho Vitamin awukona okungaka, kumane nje umkhiqizo esisemqoka, omunye wemithombo abacebe zemvelo amavithamini.
Sethemba manje nina niyenzé kulula bakale "kochwepheshe" futhi "nebubi", uyaqonda, kulokho engu anganika uju ingane. Hlola uma kukhona komzimba ingane ke ukhululeke uyifaka ku ekudleni kwalo mkhiqizo ewusizo kakhulu. Zikhula enempilo!
GPS-Tracker izingane ngesimo isongo kanye nokusebenzisa kwayo
Joanna Krupa: Biography kanye nempilo yakho
Metroendometritis Okungalapheki: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Indlela ukuqeda kwemali isitatimende: isibonelo ukugcwaliswa, ukugcwalisa oda, imithetho, iziqondiso